ယုနျလေးရဲ့ MTV နောကျကှယျက အရှုပျထုပျတှကေို ဖျေါထုတျလိုကျကွပွီ
Posted by mmaedkza on October 13, 20200Comments
ယုနျလေးရဲ့ အရှုပျထုပျကို ဖွခွေငျး (၂)နောကျတဈယောကျဆိုတာ ဘယျသူလဲ?
ကိုယုနျလေးက သူ့အကောငျ့မှာ ငွငျးသလို၊ မငွငျးသလိုလို ဝလေ့ညျကွောငျပတျ ရှငျးတာတှပေ့ါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဆကျဖျောပါမယျ။
၃၀-၇-၂၀၂၀ ရကျနမှေ့ာ ခငျဗြားဟာ မွနျမာအမြိုးသားလကွေောငျးလိုငျးခရီးစဉျ101 လယောဉျနဲ့ ရနျကုနျကနေ နပွေညျတျောကို မနကျ ၈ နာရီလောကျမှာ ရောကျလာခဲ့တယျ။ (ခငျဗြား Tablet ကိုငျပွီး ထိုငျစီးလာတာကို တှလေို့ကျတဲ့ မကျြမွငျသကျသတှေေ ရှိတယျ)
အဲဒီညမှာပဲ ခငျဗြားဟာ နပွေညျတျောက စားသောကျဆိုငျတဈဆိုငျမှာ
ခငျဗြားနဲ့တှခေဲ့တဲ့ နောကျတဈယောကျဆိုသူဟာ မာစီးဒီးကား YGN 5M-6969 (C200 Model) ကို စီးသူ ဖွဈတယျ။ (အောကျမှာ ဓာတျပုံပွထားပါတယျ။) အဲဒီကားပိုငျရှငျက ဗီဒီယိုဖိုငျနဲ့ပတျသကျတဲ့ ကုနျကစြရိတျအားလုံးအပွငျ ခငျဗြားအတှကျ ဘောကျဆူးတှကေို တာဝနျယူကခြံသှားတယျ။
သူ့ရဲ့ဇနီးသညျနဲ့ သမီး(၂)ယောကျဟာ လကျရှိ မန်တလေးမှာ နထေိုငျပါတယျ။ တံတားဦးတဈဝိုကျမှာ သူ့ပိုငျမွတှေေ အမြားကွီးပါ။ သူက ခငျဗြားကို ကပျြသိနျးနှဈထောငျကြျော ပေးခဲ့ပါတယျ။ နပွေညျတျောမှာ ခငျဗြား သှားတှခေဲ့တယျဆိုတဲ့ စားသောကျဆိုငျဟာ သူ မကွာခဏ သှားရောကျလရှေိ့တဲ့ ဆိုငျပါပဲ။
ဒါ့ကွောငျ့ ဒီဆိုငျကို ခငျဗြားတို့ သှားတှရေ့တာဖွဈတယျ။ သူ့နာမညျ “သုံးလုံး” ၊ ၁၉၈၉ ခုနှဈမှာ ……တက်ကသိုလျက ဘှဲ့ရတယျ။
ကိုယုနျလေး – ခငျဗြားကို ပွောခငျြပါတယျ။ “နိုငျငံရေးလှညျ့ကှကျတှကွေား ရောကျသှားမိတာပါ။ အခုတော့ မပွောခငျြပါဘူး။ ရှေးကောကျပှဲပွီးမှ ရှငျးပွပါရစေ” ဆိုပွီး မေးလာတဲ့မီဒီယာတှကေို ခငျဗြား ဖွတေယျနျော။ ဒီတော့ ခငျဗြားကို မေးခငျြတယျ။
(၁) ရှေးကောကျပှဲပွီးမှ ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျက ဘာလဲ? ရှေးကောကျပှဲအတှကျလုပျတဲ့ MTV ဆိုတာ ရှေးကောကျပှဲပွီးမှ ခငျဗြား ဝနျခံမှာလား?
(၂) နာမညျ “သုံးလုံး” နဲ့လူဆီကရတဲ့ သိနျးနှဈထောငျကြျော ကုနျသှားပွီလား။ နောကျထပျ ဘာထပျလုပျခိုငျးထားသေးလဲ?
(၃) ဇူလိုငျလ ၃၀ ရကျနကေ့ Tablet လေးကိုငျပွီး ခငျဗြားစီးတဲ့လယောဉျမှာ အတူတူ စီးခဲ့တဲ့ မကျြမွငျသကျသတှေေ ရှိတယျ။ နပွေညျတျောကို မသှားဘူးလို့ ခငျဗြား ငွငျးရဲလား? (လယောဉျစီးရငျ ခငျဗြားနာမညျအရငျး နာမညျသုံးလုံးနဲ့ စီးခဲ့တာပါ)
(၄) ခငျဗြားနဲ့ ဦးပိုကျထှေး၊ နန်ဒာလှမွငျ့ အရငျတှပွေီ့းတော့မှ ပိုကျဆံထုတျပေးတဲ့ နာမညျသုံးလုံးနဲ့လူကို အဲဒီစားသောကျဆိုငျမှာ လာတှတေ့ာ ခငျးဗြား ငွငျးရဲလား?
(၅) ဒီတဈခါ ဖငျပိတျငွငျးရငျ ခငျဗြားအတှကျ နောကျထပျ အထောကျအထားတှေ ထပျဖျောမယျ။ ဒီတဈခါထပျဖျောရငျ နာမညျသုံးလုံးနဲ့လူရဲ့ အဖှဲ့အစညျး၊ သူ့ရဲ့ဓာတျပုံ၊ သူ့နောကျကွောငျးကအစ ထပျဖျောမယျ။ အဲဒီအခြိနျရောကျရငျ ခငျဗြားလိမျထားတာ တဈတိုငျးပွညျလုံးသိမယျ။
နောကျဆုံးပွောခငျြတာက တဈခုခငျြး ထုတျပွနတောပါ။ ထုတျပွစရာ အမြားကွီး ရှိနတောကို မမနေဲ့ ယုနျလေးရေ။ ခငျဗြားတို့ရဲ့ ပူးပေါငျးကွံစညျမှုဟာ တိုငျးပွညျအတှကျ ဘယျလောကျ အန်တရာယျကွီးတယျဆိုတာ ခငျဗြား သိပါစေ။
Credit : Shwe Yoe Maung
ယုန်လေးရဲ့ MTV နောက်ကွယ်က အရှုပ်ထုပ်တွေကို ဖေါ်ထုတ်လိုက်ကြပြီ
ယုန်လေးရဲ့ အရှုပ်ထုပ်ကို ဖြေခြင်း (၂)နောက်တစ်ယောက်ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ?
ကိုယုန်လေးက သူ့အကောင့်မှာ ငြင်းသလို၊ မငြင်းသလိုလို ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် ရှင်းတာတွေ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆက်ဖော်ပါမယ်။
၃၀-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှာ ခင်ဗျားဟာ မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းခရီးစဉ်101 လေယာဉ်နဲ့ ရန်ကုန်ကနေ နေပြည်တော်ကို မနက် ၈ နာရီလောက်မှာ ရောက်လာခဲ့တယ်။ (ခင်ဗျား Tablet ကိုင်ပြီး ထိုင်စီးလာတာကို တွေ့လိုက်တဲ့ မျက်မြင်သက်သေတွေ ရှိတယ်)
အဲဒီညမှာပဲ ခင်ဗျားဟာ နေပြည်တော်က စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ
ခင်ဗျားနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ နောက်တစ်ယောက်ဆိုသူဟာ မာစီးဒီးကား YGN 5M-6969 (C200 Model) ကို စီးသူ ဖြစ်တယ်။ (အောက်မှာ ဓာတ်ပုံပြထားပါတယ်။) အဲဒီကားပိုင်ရှင်က ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးအပြင် ခင်ဗျားအတွက် ဘောက်ဆူးတွေကို တာဝန်ယူကျခံသွားတယ်။
သူ့ရဲ့ဇနီးသည်နဲ့ သမီး(၂)ယောက်ဟာ လက်ရှိ မန္တလေးမှာ နေထိုင်ပါတယ်။ တံတားဦးတစ်ဝိုက်မှာ သူ့ပိုင်မြေတွေ အများကြီးပါ။ သူက ခင်ဗျားကို ကျပ်သိန်းနှစ်ထောင်ကျော် ပေးခဲ့ပါတယ်။ နေပြည်တော်မှာ ခင်ဗျား သွားတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ဟာ သူ မကြာခဏ သွားရောက်လေ့ရှိတဲ့ ဆိုင်ပါပဲ။
ဒါ့ကြောင့် ဒီဆိုင်ကို ခင်ဗျားတို့ သွားတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ သူ့နာမည် “သုံးလုံး” ၊ ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာ ……တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့ရတယ်။
ကိုယုန်လေး – ခင်ဗျားကို ပြောချင်ပါတယ်။ “နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်တွေကြား ရောက်သွားမိတာပါ။ အခုတော့ မပြောချင်ပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှ ရှင်းပြပါရစေ” ဆိုပြီး မေးလာတဲ့မီဒီယာတွေကို ခင်ဗျား ဖြေတယ်နော်။ ဒီတော့ ခင်ဗျားကို မေးချင်တယ်။
(၁) ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ဘာလဲ? ရွေးကောက်ပွဲအတွက်လုပ်တဲ့ MTV ဆိုတာ ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှ ခင်ဗျား ဝန်ခံမှာလား?
(၂) နာမည် “သုံးလုံး” နဲ့လူဆီကရတဲ့ သိန်းနှစ်ထောင်ကျော် ကုန်သွားပြီလား။ နောက်ထပ် ဘာထပ်လုပ်ခိုင်းထားသေးလဲ?
(၃) ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့က Tablet လေးကိုင်ပြီး ခင်ဗျားစီးတဲ့လေယာဉ်မှာ အတူတူ စီးခဲ့တဲ့ မျက်မြင်သက်သေတွေ ရှိတယ်။ နေပြည်တော်ကို မသွားဘူးလို့ ခင်ဗျား ငြင်းရဲလား? (လေယာဉ်စီးရင် ခင်ဗျားနာမည်အရင်း နာမည်သုံးလုံးနဲ့ စီးခဲ့တာပါ)
(၄) ခင်ဗျားနဲ့ ဦးပိုက်ထွေး၊ နန္ဒာလှမြင့် အရင်တွေ့ပြီးတော့မှ ပိုက်ဆံထုတ်ပေးတဲ့ နာမည်သုံးလုံးနဲ့လူကို အဲဒီစားသောက်ဆိုင်မှာ လာတွေ့တာ ခင်းဗျား ငြင်းရဲလား?
(၅) ဒီတစ်ခါ ဖင်ပိတ်ငြင်းရင် ခင်ဗျားအတွက် နောက်ထပ် အထောက်အထားတွေ ထပ်ဖော်မယ်။ ဒီတစ်ခါထပ်ဖော်ရင် နာမည်သုံးလုံးနဲ့လူရဲ့ အဖွဲ့အစည်း၊ သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံ၊ သူ့နောက်ကြောင်းကအစ ထပ်ဖော်မယ်။ အဲဒီအချိန်ရောက်ရင် ခင်ဗျားလိမ်ထားတာ တစ်တိုင်းပြည်လုံးသိမယ်။
နောက်ဆုံးပြောချင်တာက တစ်ခုချင်း ထုတ်ပြနေတာပါ။ ထုတ်ပြစရာ အများကြီး ရှိနေတာကို မမေ့နဲ့ ယုန်လေးရေ။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဟာ တိုင်းပြည်အတွက် ဘယ်လောက် အန္တရာယ်ကြီးတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျား သိပါစေ။